ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 | RayHaber | raillynews
[23 / 02 / 2020] Menemen AliağaÇandarlıကားလမ်းအားအခမ်းအနားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်	35 Izmir
[23 / 02 / 2020] CHP မှ Bursa T2 လမ်းရထားလိုင်း၏အဆုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်ဆန္ဒပြပွဲ	16 Bursa
[23 / 02 / 2020] BUDO လက်မှတ်စျေးနှုန်းများဇယားနှင့်လမ်းကြောင်း	16 Bursa
လများ: ဖေဖော်ဝါရီလ 2020
OMÜ Bir Projem Var Topluluğu Tramvayda Farkındalık Yarattı
Samsun’da üniversite öğrencileri kitap okumanın önemine dikkat çekmek için tramvayda kitap okuyarak yolculuk etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bir Projem Var Topluluğu tarafından düzenlenen tramvayda kitap okuma etkinliği ile okumanın önemine [ပို ... ]
Türkiye’nin Antarktika’ya düzenlediği 4. Bilim Seferi kapsamında yola çıkan ekip, geçici Türk Bilim Üssü’nün bulunduğu Horseshoe Adası’na ulaştı. Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, zorlu koşullar altında gerçekleşen seyahatin ardından [ပို ... ]
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, [ပို ... ]
CHP Bursa ပြည်နယ်သမ္မတ Presidentsmet Karaca သည် T2 tram လိုင်းအားတုန့်ပြန်ရန်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုမပြီးစီးသေးပါ။ ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ Bursa ပြည်နယ်ဥက္ကChairman္ဌ metsmet Karaca၊ [ပို ... ]
Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuştur. Deniz Otobüsü Seferlerine 23 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır. İstanbul-Bursa seferlerinde yolculara İDO [ပို ... ]
Tarihte Bugün 23 Şubat 1942 İskenderun Limanı’nı Devlet Demiryolları İdaresi’nin üzerine almasına ilişkin kararname yayınlandı.
Isparta Valiliği koordinasyonunda, Isparta Belediyesi İtfaiye Ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekipleri(AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) ve [ပို ... ]
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး Mustafa Varank ကအမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားကိုရထားလမ်းများပေါ်တွင်တင်ပြီးမေလ ၂၉ ရက်တွင်စမ်းသပ်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Adapazari ခရိုင်အတွင်းရှိတူရကီ Wagon စက်မှုဝန်ကြီးအဖြစ်ဝန်ကြီး Sakarya အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသွားရောက်ခြင်း (TÜVASAŞ) Varank [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့7ရထားထုတ်လုပ်သူ Bursa Durmazlar ဦးပိုင် '' မြင်ကွင်းကျယ် '' အီးယူအဖွဲ့ဝင် Olsztyn, ပိုလန်မှစလှေတျတျောတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားလမ်းရထားဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် Bursa မှထွက်ခွာမည် [ပို ... ]
ဘဏ္Treာရေးသည် Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွင်နှစ်စဉ်မော်တော်ယာဉ် ၂၅ သန်းနှင့် ၁၂၅,၀၀၀ ကိုအာမခံထားသောမော်တော်ယာဉ် ၈ သန်းကိုပေးချေလိမ့်မည်။ 25 အတွက်လိုင် ၁၇၇ သန်းဖြစ်သောဤဥပဒေကြမ်းသည်ယခုနှစ်ခန့်မှန်းခြေသန်း ၃၀၀ ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
26 ကီလိုမီတာရှည်လျားအသစ်ကရထားလမ်းစီမံကိန်းအား, "Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် KONYARAY လက်မှတ်ပေါင်းများအတွက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရဖြစ်သော Konya မီးရထားဘူတာကနေ - Kayacık။ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင် Konya အုပ်ချုပ်ရေးမှူး [ပို ... ]
ယနေ့ဂျေရုဆလင်နျဌာနခှဲ Afula-Jenin (22 ကီလိုမီတာ) လိုင်းပြီးစီးခဲ့ပါသည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်သမိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ 1912 17 အတွက်။
Balıkesir Müselles Yan Yola Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi TCDD 3, Bölge Satınalma Stok Kntrl Müdürlüğünün (TCDD) 2019/638987 KİK numaralı yaklaşık maliyeti 841.032,32 TL olan [ပို ... ]
Kayaş Kayseri Arasında Bulunan Demiryolu İle Kesişen4Adet Enerji İletim Hatlarının Tadilat Projesi Yapım İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi TCDD 2. Bölge Emlak İnş Müdürlüğünün (TCDD) 2019/411458 [ပို ... ]